वाम एकतामा बाबुराम भट्टराई पनि सामेल हुने माओवादी नेता मणि थापाको दावी (अन्तर्वार्ता) – Everest Dainik
वाम एकतामा बाबुराम भट्टराई पनि सामेल हुने माओवादी नेता मणि थापाको दावी (अन्तर्वार्ता)
'अन्यायमा परेका वालकृष्ण ढुङ्गेलबारे सोच्नुपर्छ'
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता र नयाँ सरकार गठन नेपाली राजनीतिका यतिखेर चर्चाका बिषय हुन् । पार्टी एकताको चर्चासँगै बाबुराम माओवादी केन्द्रमै फर्कने विषयले समेत स्थान पाएको छ । यसैबीच अदालतको मानहानीको विषयमा डा. के.सी.माथि भएको सुनुवाईसँगै प्रधानन्यायाधिश पराजुलीको फैसलामाथि समेत प्रश्न उठेको बेला सोही प्रकृतिको फैसलाका कारण पीडित बनेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामाथि पुनर्विचारको चर्चा समेत चलेको छ । यिनै समसामयिक विषयमा माओवादी नेता मणि थापासँग रघुनाथ बजगाँईले गरेको कुराकानी ।
एमालेसँगको एकता प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
बाहिर जति आएका छन् त्यति हो । सबै सार्वजनिक गरेकै छौँ । केन्द्रियस्तरमै कार्यदल बनाएर गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ । सांगठनिक संरचना र बैचारिक बिषय टुङ्ग्याउन गठित कार्यदलले पनि काम सुरु गरेको छ । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुको निर्वाचन, प्रदेश सरकार र संसदको जिम्मेवारीबारे गृहकार्य गर्न गठित कार्यदलले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई गति दिएकै छ । यसरी हेर्दा पार्टी एकता प्रक्रियामा पूर्ण स्पिरिटका साथ अघि बढेको छ ।
यसो भनिरहँदा प्रदेशसभा गठन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा त आ–आफ्नो दलले पाएको मतलाई आधार बनाएर उम्मेद्वार छनौट गर्दै हुनुहुन्छ त ?
एकताको प्रक्रिया अघि बढेको हो, एक भैसकेको त होईनन नि । त्यसैले जनमतलाई पनि आधार बनाइएको हो । कार्यदल बनाएर काम अगाडि बढेपछि एकता हुन्न भन्ने आशंका समाप्त भएको छ । सदन र सरकाका कतिपय कुरा प्राविधिक हुन्छन्, त्यसैले पनि एकताको घोषणा नहुँदासम्म त अहिलेकै अवस्थामा अघि बढनु पर्ने यथार्थता हो ।
संगठनात्मक समस्या त्यस्तो देखिन्न । कतिपय अवस्थामा चुनाव अघि र पछि कतिपय नेताहरुले व्यक्त गरेका विचार र सोचाईले पनि अर्थ राखेको छ ।
हिजो बुधवार त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले १५ दिन भित्र पार्टी एकता हुन्छ भनेका थिए, एकता गरेर उम्मेदवार छान्न पनि त सकिन्थ्यो नि ?
कमरेड ओलीले के आँकलन गरेर त्यो समय किटान गर्नुभयो, त्यो त थाहा भएन तर मैले भने प्राविधिक कुरा टुंग्याएर एकता गर्न केही समय लाग्ने देखेको छु ।
खासमा ढिलाई के मा भइरहेको हो, चर्चामा आएजस्तो सरकार, पार्टी नेतृत्व र नेताहरुको व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो ?
पद र जिम्मेवारी बाँडफाँडका कारण मात्रै ढिलाई भएको होइन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको हकमा कुनै मापदण्ड लाग्दैन । उहाँहरु बराबर नै हुने हो । दोस्रो तह, तेस्रो तहमा भने जनमत, व्यक्तित्व वा नेतृत्वको योगदान जस्ता बिषयलाई हेरेर पार्टी एकताको भावना कायम राख्न र दुवै पक्षको सन्तुलन कायम गर्नमा सबै सहमत छौँ । यस हिसावले संगठनात्मक समस्या त्यस्तो देखिन्न । कतिपय अवस्थामा चुनाव अघि र पछि कतिपय नेताहरुले व्यक्त गरेका विचार र सोचाईले पनि अर्थ राखेको छ । प्रतिपक्षीको चलखेल र दुबै पार्टीमा देखिएको केहि आन्तरिक असन्तुष्टीले पनि ढिलाई हुन थोरै भूमिका खेलेको मैले पाएको छु ।
बाबुराम भट्टराई माओवादीमै फर्कने बिषय चर्चा साँचो हो । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसंग पनि उहाँले कुरा गर्नुभएको भन्ने छ । यसअघि असोजमा पनि वाम एकता गर्ने निर्णयको घोषणा हुँदा बाबुरामजी सँगै हुनुहुन्थ्यो पनि ।
त्यसो भए ‘एमालेसँग भन्दा पहिले बाबुराम, बैद्य र विप्लवसंग एकता गर’ भन्ने आशयका विचार तपाईले भन्न खोजेको असन्तुष्टीका अभिव्यक्ति हुन ?
ठ्याक्कै त्यसरी नबुझौं, पार्टी एकता भनेपछि कैयन् पक्षमा विचार, विमर्श, चिन्ता र चासो हुन्छ । यो प्रक्रियामा आफ्नो स्थान कहाँ रहने भनेर चिन्तित हुनेदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलन, कार्यदिशा र वाम गठबन्धनको भविष्य के होला भन्ने चिन्तनले पनि केहि काम गरेको छ । यी असन्तुष्टिहरु त्यसकै उपज हुन भन्ने लाग्छ । जहाँसम्म बाबुराम, बैद्य र विप्लवसंग एकता गर्ने कुरा छ, तीनवटै पक्ष अहिल्यै नै एकता प्रक्रियामा आईहाल्छन भन्ने लाग्दैन ।
बाबुराम जी फर्किने कुरा त माओवादीकै जिम्मेवार नेतृत्वबाट अभिव्यक्त भएको समाचारमा सत्यता कत्तिको छ ?
बाबुराम भट्टराई माओवादीमै फर्कने बिषय चर्चा साँचो हो । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसंग पनि उहाँले कुरा गर्नुभएको भन्ने छ । यसअघि असोजमा पनि वाम एकता गर्ने निर्णयको घोषणा हुँदा बाबुरामजी सँगै हुनुहुन्थ्यो पनि । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा केही प्राविधिक विषयमा कुरा नमिलेको मात्रै हो । निर्वाचनपछि उहाँ माओवादीमै वा वाम पार्टी घोषणा हुँदासम्म उहाँ आउने भन्ने बिषयमा धेरै सकारात्मक कुरा छ ।
मोहन वैद्य र विप्लवहरु नि ?
अब सैद्धान्तिकरुपमा हेर्दा मोहन बैद्य कमरेडहरुको पार्टी यो व्यवस्थालाई स्विकारेर निर्वाचनमा सहभागी भएको हो । त्यसैले कार्यदिशामा त्यहाँ पनि खासै भिन्नता होला भन्ने छैन । तर उहाँहरुको नेतृत्व भन्दा पनि पार्टीका अन्य तहका नेताहरु ‘माओवादीसँग एकता गरेर जाने कि’ भन्ने बहस चलाईरहेका छन् । उहाँहरु पनि वाम एकता प्रति नरम देखिनुभएको छ । तर हामीले अब यो वाम एकतामा कार्यदिशा, संगठन, कार्यशैलीलगायतका विषयमा के कस्तो निर्णय गर्छौं भन्ने बिषयले उहाँहरु पार्टी एकतामा आउने बिषय निर्धारण होला ।
उहाँ गिरप्तारी हुँदा माओवादीले एउटा वक्तव्य समेत निकालेन भन्ने बिषय छ । यो पनि साँचो हो । पार्टीले स्पष्ट धारणा पनि बनाएको छैन । अब नयाँ सरकार बनेपछि के गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।
विप्लव समूह तत्कालै माओवादीमा फर्कने या वाम एकतामा सामेल हुने भन्ने चाहीँ मैले पाएको छैन् । उहाँको गतिविधि र यो व्यवस्था प्रतिकै असन्तुष्टीले माओवादीसँग पार्टी एकता गर्छन् भन्ने बिषय हल्ला मात्रै हुन । यसमा सत्यता छैन् ।
प्रसङ्ग बदलौं, डा. गोविन्द केसीविरुद्धको सुनुवाईमा प्रधान न्यायाधिश गोपाल पराजुलीको आदेश झिकाउन अर्को आदेश भएपछि माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलका बिषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा पनि पुर्नबिचार हुनुपर्ने आवाज उठेको छ, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यो विषयमा पार्टीका तर्फबाट अहिल्यै आधिकारिकरुपमा केही भन्न सक्ने अवस्थामा म छैन् । तर बालकृष्णजी अन्यायमा पर्नुभएकै हो । त्यसबारे सोच्नुपर्छ । जनयुद्धकालिन मुद्धामा उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ । उहाँ गिरप्तारी हुँदा माओवादीले एउटा वक्तव्य समेत निकालेन भन्ने बिषय छ । यो पनि साँचो हो । पार्टीले स्पष्ट धारणा पनि बनाएको छैन । अब नयाँ सरकार बनेपछि के गर्न सकिन्छ भन्ने हो । केपी ओली पनि लामो समय जेल बसेके नेता हो । एमालेले पनि जनयुद्धलाई स्विकार गरेपछि जनयुद्धकालिन मुद्धा हल गर्न सहज हुन्छ ।
ट्याग्स: Left Unity, mani thapa, raghunath bajagain